कृषी भनेको के हो ? नेपालमा कृषीको अवस्था कस्तो रहेको छ ब्याख्या गर्नुहोस् । « Nijamati Khabar
कृषी भनेको के हो ? नेपालमा कृषीको अवस्था कस्तो रहेको छ ब्याख्या गर्नुहोस् ।
कृषी भनेको के हो ? नेपालमा कृषीको अवस्था कस्तो रहेको छ रुरु ब्याख्या गर्नुहोस् ।
जापान, अमेरीका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल लगाएतका देशहरूमा कृषिमा १०÷१५ प्रतिशत मानिसहरु मात्र सहभागि हुँदा पनि लगभग ५० प्रतिशत भन्दा बढी कृषिजन्य सामाग्रिहरू निर्यात गर्न सकेका छन् । त्यसबाट उनीहरूले मनग्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेका छन् । तर हामीचाहिँ किन सधैँ परनिर्भरतामा बाच्नु परेको छ त ? हाम्रो लागि यो असम्भव नै हो र ! हामी पनि हाम्रो देशलाई पुग्ने मात्र होइन विदशै निर्यात गर्न सक्ने गरि कृषिमा उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ ?
नेपालमा हरेक साल नीति तथा कार्यक्रम बन्दा तथा सरकारले बजेट बिनियोजना गर्दा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामै राखेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र सहुलियत ऋणको कुरालाई पनि त्यत्तिकै जोड दिएको देखिन्छ । तर सरकारको योजना फगत कागजमा सिमित हुँदा कृषि क्षेत्र उँभो लाग्न सकेको छैन । सरकारका योजना हरेक कृषकको घरआँगनमा आइपुगेको छैन । कृषकलाईं दिने भनेको सेवा र सुविधा पनि कृषि क्षेत्रका बिचौलिया र नेताहरूको अगाडि पछाडि लाग्नेले मात्र उपभोग गरिरहेका छन् ।
तर बास्तविक कृषक भने बिऊ बीजन समेत किन्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको छ । उनीहरूले न त उन्नत बिऊ बीजन पाउन सकेका छन् नत उचित तालिम या परामर्श नै पाउन सकेको छन् । उही कुट्टो कोदालोको भरमा पुरातन खेतीप्रणालीबाट उनीहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् । यसले निर्वाहमूखी अर्थतन्त्रलाई प्रस्रय दिइरहेको छ । यसबाट न उत्पादकत्व बढ्न सकेको छ न कृषि क्षेत्रमा नयाँनयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिएको छ । यसबाट देशको ठूलो धनरासी कृषिजन्य सामाग्रिहरू आयातमै खर्च भइरहेको छ । यसबाट कृषिमै व्यापारघाटा उच्च बन्न पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक खिचातानी, जनस्तरमा चेतनाको कमी र सरकारको अक्षमता नै हो ।